स्वास्थ्य – Samaj Khabar
खान–पिनमा शौकीन व्यक्तिलाई कुनै विशेष खाद्य पदार्थको लाभ तथा हानीबारे जानकारी हुँदैन । उनीहरुलाई त्यो कुराले फरक पनि पर्दैन । किनकी त्यस्ता व्यक्तिलाई जुन खानेकुराको स्वाद मनपर्यो, त्यसलाई नखाइ छाड्दैनन् । तर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नेहरु हरेक समयमा हरेक खाद्य पदार्थको राम्रा तथा नराम्रा....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं- मेवा र कागती दुवै स्वास्थ्यका लागि धेरै लाभदायक हुन्छन् । पेटका लागि मेवा वरदान हो किनकि यसमा भिटामिन ए, बी, सी र फाइबर भरपूर हुन्छ । कागती खाँदा पेट, आँखा र छालाको समस्या हुँदैन । यसका अतिरिक्त यसमा फस्फोरस, पोटेसियम, आइरन, एन्टीअक्सिडेन्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन र सोडियम जस्ता खनिज पदार्थ....पुरा पढ्नुहोस
सप्तरी । सप्तरीमा पहिलोपटक सिटीस्क्यान र सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) सेवा शुरु हुने भएको छ । रुपनी गाउँपालिकास्थित युनिक अस्पतालले सिटीस्क्यान मेसिन जडानकार्य सम्पन्न गरेको अस्पतालका अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । ठाकुरले पाँच भेन्टिलेटरसहितको आइसीयु र पाँच सिसीयुसमेत जडान गरिएको....पुरा पढ्नुहोस
नेपालीहरु किन कण्डम प्रयोग गर्दैनन् ?
काठमाडौं । यौन सम्पर्कका लागि सुरक्षित मानिने कण्डम नेपालमा न्यून प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । एचआइभी तथा यौनरोग सर्नबाट बचाउने, नचाहेको गर्भ नरहने, जन्मान्तर र परिवारको आकार सीमित गर्नका लागि भरपर्दो साधन भए पनि नेपालमा यसको प्रयोग कम देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कण्डम दिवस २०७५ अर्थात् फेब्रुअरी....पुरा पढ्नुहोस
मेक अप गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुस् (टिप्स)
काठमाडौं । मेक अपले तपाईको सौन्दर्यमा निखार ल्याउछ । सही मेक अपले भने तपाईको व्यक्तित्व र आत्मविश्वासमा पनि निखार ल्याउछ । मेक अप गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुभयो भने तपाईलाई उपयोगी हुनेछ । –मेकअप गर्दा सबैभन्दा पहिला क्लिन्जिङ क्रिमले अनुहार सफा गर्ने । –त्यसपछि कटनमा टोनर राखेर अनुहारमा लगाउने....पुरा पढ्नुहोस
हामीलाई चिनाउने मुख्य आधार भनेको गुन्द्रुक र ढिडों नै हो । यो भन्यो यतिखेर हरेकको मुखबाट पानी आउन सुरु हुन्छ । विशेष गरी यसको प्रचलन गाउँमा मात्र नभएर पछिल्लो समय सहरको धनीहरुमा पनि चढेको छ । यसको मुख्यकारण यसले शरिरमा दिने फाइदाको कारण यस्तो भएको हो । तर गाउमा भने यसलाई छाक टार्ने मेलको रुपमा मात्र....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौं । सिस्नो प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ । यसमा रहेको औषधि गुण र प्रभावकारीका कारण पछिल्लो समय सहरी क्षेत्र, होटल र रेष्टुरेन्टमा समेत यसको प्रयोग बढ्दो छ । सिस्नोलाई सुकाएर बनाएको धुलो सुपरमार्केटहरुमा प्याकमा समेत किन्न सकिन्छ । १० ग्राम सिस्नोको धुलोलाई करिब दुई सय मिलिलिटर तातोपानीमा रातभरि....पुरा पढ्नुहोस
न्याम्सको उपकुलपतिमा डा. शाह नियुक्त
काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपतिमा प्रा डा डिएन शाह नियुक्त भएका छन्। न्याम्सका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपतिका लागि सिफारिसमा परेका तीन जनामध्ये डा शाहलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन्। उपकुलपति नियुक्तीको निर्णय भने अझै गोप्य राखिएको छ। डा....पुरा पढ्नुहोस
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा वीरेन्द्र अस्पतालको निरीक्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छाउनीस्थित वीरेन्द्र अस्पतालको निरीक्षण गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री ओली उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगै छाउनीमा रहेको वीरेन्द्र अस्पतालमा पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले निरीक्षणको क्रममा अस्पतालको अतिविशिष्ट कक्ष, इमरजेन्सी वार्ड....पुरा पढ्नुहोस
अब निको हुन्छ क्यान्सर पनि: विशेषज्ञ
एक जमाना थियो, क्यान्सर भन्नेबित्तिकै सबै थर्कमान हुन्थे । कुनै रोगीमा क्यान्सर भएको देखियो भने परिवारमा रुवावासी चल्थ्यो, चिकित्सक स्वयं पनि निराश र हतोत्साही बन्न पुग्थे । किनभने, क्यान्सर भनेको निको नहुने रोग थियो । भनाइ नै चलेको थियो, ‘एन्सर’ नै नभएको रोगको नाम हो क्यान्सर । सुखद कुरा के छ भने,....पुरा पढ्नुहोस